रोचक जानकारी Archives - Pokhara Post
सूर्य ग्रहण: भ्रम र यथार्थ
रामचन्द्र पगेनी आज सूर्य ग्रहण। प्रायः ग्रहणहरुलाई चासोको रुपमा लिइने गरिन्छ ।ग्रहणबारे विभिन्न मान्यताहरु पनि रही आएका छन। पुराणहरुमा ग्रहण हुनुलाई सूर्य र चन्द्रमालाई राहुले निलेको आदि भन्ने गरिन्छ । तर ग्रहण विषुद्ध एक खगोलीय घटना भएको कुरा खगोलविद एवं ज्योतिषविदहरु बताउँछन। ग्रहणको बेला सूतक लाग्ने भन्दै पञ्चाङ्ग र ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहण लागेको समयमा पालना गर्नु […]
जीवनमा सँधै गोप्य राख्नु पर्ने केही कुरा
पूर्वीय दर्शनमा जीवनमा सँधै गोप्य राख्नु पर्ने केही कुराको चर्चा गरिएको छ । कतिपय कुराहरु हामीले अरुलाई सेयर नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । हामीले यहा जीवनमा सदैव गोप्य राख्नुपर्ने केही कुराहरुको बारेमा चर्चा गरेका छौं । १. रातिक्रिडा जीवनमा यौन सम्बन्धको विषयमा कसैलाई पनि नभन्नुस् । कुनै स्त्री तथा पुरुषबीचको यौनिक क्रियाकलाप अरुसँग भनेर मजा […]
थाइल्यान्डमा खानुसम्म ठक्कर खाएर नेपाल फर्किएपछिको सार्वजनिक व्यवहारले उदण्ड छवि सुध्रँदै थियो, पूर्व युवराज पारसको । लागूऔषध केसमा चार पटक पक्राउ परेसँगै गम्भीर बिरामी भएका उनी धन्न बाँचेका थिए । एक महिना लामो उपचारपछि बौरिएर नेपाल फर्किएपछि उनको दैनिकी निक्कै बद्लिएको देखिन्थ्यो । लागूऔषधको लत र गम्भीर बिरामीको प्रभावले पहिलाझैँ चमक थिएन उनको मुहारमा । […]
प्रेम दिवसको छेकोमा पल र आँचलको जोडी भिडियोसहित
प्रणयको दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गीतकार सुरेश वाग्लेको रोमान्टिक गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। राहुल विश्वास र गायिका स्नेहश्री थापाको युगल गायनमा ‘मायामा तिम्रो…’ बोलको गीत सोमबार सार्वजनिक भएको हो। मेघराज लगुनद्वारा संगीतबद्ध सार्वजनिक सुरेश वाग्ले र संगीतकार लगुन स्वयंकै रचना रहेको छ। सुमित विश्वकर्माको संगीत संयोजन रहेको गीतलाई भारतको कोलकत्ता तथा काठमाडौंमा रेकर्ड गरी […]
हराउन लाग्याे मारुनी नाच
कुमाल समुदायको पुर्खौली संस्कृति मारुनी नाच समुदायबाटै लोप हुन थालेको छ। युवापुस्ताले संस्कृति संरक्षणमा ध्यान नदिँदा समुदायमा प्रख्यात मारुनी नाच लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हो। रोजगारीको सिलसिलामा युवापुस्ता विदेशन पलायन हुँदा गाउँमा बसेर युवापुस्ताले संस्कृति सिक्ने अवसर पाएका छैनन्। अझै पनि फाट्टफुट्ट केही ठाउँमा पाकापुस्ताकै भरमा मारुनी नाच देखाउने गरिएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–३ भलायटारका मारुनी […]
कक्षा कोठामा मुख्यमन्त्री
बिहान १० बजेको थियो । अन्य दिनजस्तै आज पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको मावि कालाखोलाका विद्यार्थी प्रार्थना गरिरहेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश नं– ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेलगायत अन्य अतिथि विद्यालयमा पुग्नुभयो । विद्यार्थी प्रार्थना गरिरहेकै बेला औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । अनि शुरु भयो प्रदेश […]
९१ वर्षीया महिलाको २३ वर्षीय युवकसँग विवाह, हनिमुनमा घट्यो यस्तो घटना
कहिलेकाँही संसारमा निकै अनौठो लाग्ने समाचारहरु आउने गर्छन् । यसै सिलसिलामा २३ वर्षीय युवकले ९१ वर्षीया वृद्धासँग विवाह गरेको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । विवाहपछि यस्तो घटना घट्न पुग्यो कि युवक जेल जाने अवस्थामा समेत पुगेका थिए । २३ वर्षीय उक्त युवक आफ्नो पढाइ पूरा गर्ने चक्करमा थिए तर उनीमाथि आर्थिक समस्या […]
चार वर्ष नियमित सम्भोग गर्दापनि महिला भर्जिन!
एक चिनिया दम्पत्ति बिहे गरेको चार वर्ष भैसक्दा पनि बच्चा नजन्मिएका कारण चिन्तित थिए । चार वर्षदेखि नियमित रुपमा सेक्स गरिरहँदा पनि गर्भ नबसेपछि उनीहरु उपचारका लागि डाक्टरकोमा गए । तर जब उनीहरु डाक्टरकोमा गए, तब निकै अनौठो तथ्य पत्ता लाग्यो । चार वर्षदेखि आफ्नो लोग्नेसँग नियमित सेक्स गरेको भनिएकी ती महिला वास्तवमा कुमारी अर्थात् […]
यौनांगविना जन्मिएका पुरुषको सय महिलासँग यौन सम्पर्क
कुनै पुरुष जो यौनांग विना जन्मिएको हुन्छ, त्यसले एक दुई होइन सय–सय जना महिलासँग यौन सम्पर्क गर्दछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बेलायतको म्यानचेष्टरका एक पुरुषले यस्तो अनुमानलाई गलत सावित गरिदिएका छन् । उनले अहिलेसम्म १ सयभन्दा धेरै महिलासँग सेक्स गरिसकेको दाबी गरेका छन् । एन्ड्रयू वार्डल नामका ती पुरुषका बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री नै बनाइउको […]
नेपालको ताज महल भनेर चिनिने पाल्पाको रानीमहललाई थप आकर्षक बनाउन यसको पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालिएको छ । पुरातात्विक महत्वको रानीमहलको स्वरुप वातावरणमैत्री इको पार्क बनाउन प्रदेश नं ५ को सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । प्रदेश ५ को पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका वातावरणमन्त्री लिला गिरीले […]